BVC 2,5 år - andra språk - 1177
Hälsobesök på BVC vid 2,5 år - somaliska
BVC: 2,5 sano
Hälsobesök på BVC vid 2,5 år - somaliskaThe content concerns Västra Götaland
Marka uu ilmuhu jiro 2,5 sano waxaa lala kulmi doonaa kalkaalisada caafimaadka, waxaa kulanka booqashada aan kaga hadli doonaa arimo khuseeya xaalada caafimaad ee ilmaha iyo koritaankiisa. Waxaa kale oo la tix raaci doonaa waxyaabihii laga hadley kulanadii hor.
Waxaa jira fursad lagaga hadli karo waxyaabo ay ka mid yihiin macnaha i waalid la noqdo, nolol maalmeedka qoyska, sida uu yahay ilmuhu muddada uu ku suganyahay dugsiga xanaanada carruurta cuntada ilmaha iyo nabdgalyada ilmaha. Waxaa caadi ah in laga hadlo cuntooyinka uu ilmuhu cuno, sida uu yahay jawiga marka qoysku wada cunteynato wakhtiyda cuntada, ciyaarta iyo in la wada jiro. Waxaa haboon in la abuuro caadooyinka la xidhiidh cuntada iyo dhaqdhaqaaqa wakhti hore maadaama ay saameyn ku yeelan doonto xaalada caafimaad ee ilmaha ee noolashiisa oo dhan.
Kalkaalisad caafimaadku waxaa ay la ciyaari doontaa ilmaha si ay u aragto sida uu ilmuhu u dhaqdhaqaaqayo, sida uu hadlayo iyo sida uu wax u fahmayo. Sidoo kale waa la miisaami doonaa isla markaana waxaa la cabiri doonoo dhererka ilmaha.
Ku soo dhawoow kulanka mcaafimaadka marka ilmuhu jiro 2,5 sano ee ka dhici doona rugta daryeelka caafimaadka!
Hadda waxa aad ogaan doontaa waxyaabaha dhici doona muddada lagu gudo jiro booqashada aad ku timid rugta daryeelka caafimaadka BVC, marka aad jirto 2,5 sano. Waxaa aad smeyn doontaa waxyaabo kala duwan, waalidkaaguna waa ay kula joogi doonaan muddada kulanku socdo oo dhan.
Si wadjir ah ula fiiri ilmahaaga sawirada ka hor inta aanad noogu iman booqashada. Waxaa fiican in adiga iyo ilmaha labadiinuba aad ogaataan waxa dhici doona isla markaana aad u diyaar garowdaan.
Adiga iyo kalkaalisada caafimaadka ayaa wada hadli doona isla markaan waad wada ciyaari doontaan.
Waxaa aad la kumi doontaan kalkaaliso caafimaad, taas oo fiirin doonta sida uu ilmuhu u korayo, sida uu u hadlayo iyo sida uu wax u fahmayo.
Muddo kooban ayaad wada sheekeysan doontaan arimo ku saabsan xaaladaada caafimaad iyo waxyaabaha aad jeceshahay in aad sameyso.
Waxaa aad ka wada hadli doontaan arimo ku saabsan ilmahaaga iyo haddii aad qabto wax su’aalo ah ka waalid ahaan.
Maxaa ku jira boorsadan?
Waxaa aad si wadajir ah u fiirin doontaan alaabta ay carruurtu ku ciyaarto oo ku dhex jira boorso. Ma qiyaasi kartaa waxa ku jira boorsada?
Halkan waxaa ay kalkaalisada caafimaadku fiiro gaar ah u yeelan doontaa sida uu ilmuhu ula shaqeynayo dadka kale, kobaca luqada iyo sida uu ula xidhiidhayo dadka kale.
Halkan waxaa ay kalkaalisada caafomaadku fiirin doontaa sida ilmuhu ula shaqeynayo dadka kale, kobaca luqadda iyo wada hadalka dadka kale.
Halkan waxaa ay kalkaalisada caafimaadku fiirin doontaa dhaqdhaqaaqa xoogan isla mrkaana waxaa ay dhageysan doontaa kobaca luqadda ee ilmaha.
Waa la miisaami doonaa ilmah isla markaana waxaa lagu sameyn doonaa baadhitaan iska oo kalsoon kaliya xidhan.
Miisaamid iyo cabiris
Dhererkaagu intuu dhanyahay? Kalkaalisada caafimaadka waa ay ku miisaami doonta isla markaana waxaa ay cabiri doontaa inta uu dhererkaagu noqdey. Marka la cabirayo dhererkaaga waxaa la isticmaali doonaa qalabka lagu cabiro dhererka ee kaaga muuqda sawirka (mätsticka). Waxaa loo baahanyahay in aad is toosiso muddo yar oo gaaban inta la fiirinayo inta uu dhererkaagu yahay.
Miisaanka jidhkaagu intuu dhanyahay? Waxaa sawirka kaaga muuqda miisaan. Waxaa lagaa rabaa in aad miisaanka ku dul joogsato muddo yar oo kooban si loo cabiro miisaanka jidhkaaga.
Mar kasta oo ilmuhu soo booqdo rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC waxaa la miisaami doonaa culeyska jidhka ee ilmaha isla markaana waxaa la cabari doonaa dhereka ilmaha si loo arko sida uu yahaya koritaanka ilmuhu.
Laad ama riix kubbada
Waxaa aad laadi ama riixi doonta kubbad.
Muddada lagu gudo jiro leyliskan, waxaa ay kalkaalisada caafimaadku fiirin doontaa sida uu u kobcayo dhaqdhaqaaqa ilmuhu.
Ma boodi kartaaa adiga oo labada lugood isku dhajinaya? Waxaa aad tijaabin doontaa marka aad nasoo booqato.
Muddada la sameynayo layliskan, waxaa ay kalkaalisada caafimaadku fiirin doontaa sida uu u kobcayo dhaqdhaqaaqa ilmuhu.
Hadda kulankii booqashadu wuu dhamaadey, nabad gelyo, waxaa aan is arki doonaa kulankan kulanka xigga!
Marka uu kulanka booqashadu dhamaado. Waxaa la idin siin doonaa balan kulanka soo socda markaas oo uu ilmuhu jiro 3 sano. Haddii aad dareento in aad u baahantahay isla markaana aad rabto waxaa aad qabsan kartaa balan kaas ka horeeya.
Halkan ka akhri macluumaad dheeri ah oo ku saabsan cuntooyika carruurta yaryar ee u dhaxeysa 2-17 sano (svenska)
Waxaa aad halkan ka arki kartaa foomka su’aalaha ee rugta daryeelka caafimaadka u dirto guriga (svenska)
Halkan ka akhri macluumaad ku saabsan koritaanka carruurta ay da’doodu u dhaxeyso 2-3 sano (svenska)